राष्ट्र बैंक – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)लाई संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यो संशोधित विधेयकलाई अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संसद्मा टेबल गर्नेछन् । अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेपछि आवश्यक परेको खण्डमा थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइने प्रावधान छ । संसदीय समितिले सरोकारवाला निकाय र संसदीय समितिसँग छलफल गरेर संसद्को पूर्ण
जोखिम व्यवस्थापनमा मेनेजमेन्ट टिमको भूमिका महत्वपूर्ण
गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल । नयाँ नयाँ सूचना तथा संचार प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय क्षेत्रको सुधारका साथमा जोखिम पनि बढाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्दछ । २००८ को आर्थिक मन्दीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जोखिम व्यवस्थापनको विषयलाई
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले हालसम्म चार वटा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका उनले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ देखि हालसम्मका मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । पुनः कार्यभार नसम्हालेको खण्डमा सम्भवतः उनको र्आिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति उनको अन्तिम मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बमबहादुर मिश्रको बढुवा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्र्यौट विभागका बमबहादुर मिश्र कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका छन् । राष्ट्र बैंकको बिहिबार बसेको संचालक समितिको बैठकले मिश्रलाई कामु कार्यकारी निर्देशकबाट बढुवा गरेको हो । उनले झन्डै १७ वर्षअघि राष्ट्र बैंकमा सुपरीवेक्षण विभागको सहायक निर्देशकका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । बिदेशी विनिमय र ट्रेड फाइनान्समा उनको बिशेष
आर्थिक विकासमा राष्ट्र बैंकको भुमिका र मुख्य कामहरु
बैंकिङ खबर । मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि हरेक मुलुकमा एउटा केन्द्रीय बैंक रहेको हुन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंक हो नेपाल राष्ट्र बैंक । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनका लागी सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ साल वैशाख १४ गते गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक भएकोले यसले
बैंक सञ्चालक र कर्मचारीलाई कसरी लाग्छ बैंकिङ कसुर ? ( राष्ट्र बैंकको निर्देशिका सहित)
बैंकिंग खबर । कहिलेकाही जानी नजानी यस्तो कसुरको सजायको भागीदार बन्नु पर्न सक्छ । पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि उनीहरुले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले गर्न नहुने काम
राष्ट्र बैंकका आठ कार्यकारी निर्देशकको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आठ जना कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकमा देवकुमार ढकाल आएका छन् । ढकाल यसअघि भुक्तानी विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । नियमन विभागमा प्रमुख रहेका बमबहादुर मिश्र भुक्तानी विभागमा पुगेका छन् । उनी कामू कार्यकारी निर्देशक हुन् । त्यस्तै,
चर्को सेवा शुल्क लिने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन, तोकिदियो सेवाशुल्क
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी सेवा शूल्क लिने गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेवा शुल्कमा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जामा एउटै शेवा शुल्क लिन र सो बापत सुन्न दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन निर्देशन गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन घट्यो
बैंकिङ खबर । गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को ११ महिनाको अवधीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलनमा गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो बर्षको सोहि अवधीमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलनमा ०.२ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को ११ महिना महिनाको अवधीमा बैंक तथा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा भएको लगानी बिक्री गर्दै
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा गरेको ३४.६० प्रतिशत लगानी बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने भएको हो । नेप्सेमा सबैभन्दा धेरै लगानी नेपाल सरकारको रहेको छ । नेपाल सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानी बिक्री गर्न लागेको हो
मौद्रिक नीतिमा गभर्नर डा. नेपालको छलाङ्ग, के प्रगति गरे ४ बर्षमा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले २०७१ साल चैत ८ गते देखी ४ बर्षको लागि गभर्नरको कार्यभार समालेका थिए । उनको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ । राष्ट्र बैंकमा १६ औं गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएर उनले कार्यकालको पहिलो र राष्ट्र बैंकको १३ औं मौद्रिक नीति सार्वजानीक गरेका थिए
साँवा र ब्याज तिर्ने समय १५ दिन थप
अम्बु रुचाल , बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको माग अनुसार साँवा र ब्याज तिर्ने समय अवधी थप गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शुल्कको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले एकपरिपत्र जारी गर्दै साँवा र ब्याँज तिर्ने समय १५ दिन थप गर्न निर्देशन दिएको हो । केहि दिन अगाडि
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुधबार सम्म २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार १२ गते बिहीबार वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएयता २० वटा बैंकले मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसअघि सम्म १७ वटा बैंकहरुले मात्र लिखित प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका